FAKTA: yaa xaq u leh taageero dhaqaale? - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
FAKTA: yaa xaq u leh taageero dhaqaale?
La daabacay måndag 23 november 2015 kl 12.45
FAKTA: yaa xaq u leh taageero dhaqaale markuu qof daryeelayo qaraabadiisa daryeel u baahan?
Waxaa jira dhowr sharci oo quseeya shaqsiga xaquuqduu u leeyahay markuu daryeelayo eheladiisa jiran ama waayeelka noqday. Laakiin sharuucdan waxay quseeyaan keliya ruuxa Sween ku nool oo halkan ka shaqeeya oo ka diwaangashay caymiska bulshada.
Haddii qof xigtadiisa dhow (oo ahaan kara, caruurtiisa, waalidkiisa, saygiisa ama ooridiisa) jiro waxuu qofka xag u leeyahay in uu daryeelo oo caawiyo.
Qofka markaas waxuu helayaa dhaqaale inta uu daryeelayo xigtadiisa jiran, waa haddii qofka la daryeelayo uu hosbitaal yaalo.
Sharuudda middas ku xiran waxay tahay in qofka la daryeelayo iyo kan daryeelayaba ay Sweden ka diiwan-gashanyahiin. Dhaqaalaha lagu siiyo ruuxa eheladiisa jiran daryeela waxaa la yiraahdaa närståendepenning (lacagta xigtada dhow), taas oo qofka ka dalban karo hey'adda caymiska dadweynaha Försäkringskassan.
Laakiin sharuudaha lacagtas lagu helo karo ayaa ah mid adag. Waa in qofka ehelada ah ee xanuunsan yahay mid khtar ugu jira geeri.
Haddii sharuucdas qofka buuxiyo markas waxuu fasax ka dalban karaa shaqo-bixiyahiisa, fasaxaas oo la yiraahdo "daryeelka xigtada" (vård av närstående).
Sida lagu heli karo dhaqaalaha taageero iyo fasaxa deryeelka xigtada waxuu ku xusanyahay xeerka namberkiisa yahay (1988:1465) ee shariga dalka.
Qofka xigtada ah ee daryeelka ubaahan dalka dibaddiisa ku nool yahay kana diiwangashaneyn dalka Sweden, markas ruuxa xigtadiisa daryeelaya xaq uma lahan taageeradan.
Lacagta daryeelka xigtada ugu badnaa boqol maalmood calaa xigtadii ayaa la baxiya.
Isha: Försäkringskassan, Jusek
Qof xigtadiisa dalka dibaddiisa ku nooshahay waxuu la xiriir karaa shaqo baxiyahiisa oo uu weydiisan karaa fasax uu ku soo booqdo.
Siduu qobo sharciga Sweden mararka qaar qofka waxuu xaq u leeyahay fasax la xiriira sababo culu oo qoys. Waxay ahaan kartaa in xigtada ruuxa uu ku dhacay cudur halis ah ama uu galay shil oo ay lama huraan tahay in lala joogo. Shaqobxiyaha markas ruuxa ma u diidi karo fasax, shaqadana kama cayrin karo.
Laakiin sharcigan qof ma siinayo xaq ah in la siiyo mushaaro.